Apple mar dambe kuu oggolaan meyso inaad ku rakibto barnaamijyo macruufka ah ee iOS-ka ah Apple Silicon | Waxaan ka socdaa mac
Ilaa hadda, waxaad ku rakibi kartaa wixii codsi ah macruufka ah a Silicon Apple adigoon soo marin App Store. Sidii ay u ahayd casriga casriga ah ee 'Android', waxaad kala soo bixi kartaa faylka .ipa barnaamij kasta oo iOS ah oo ku jira internetka oo waxaad ku rakibi kartaa Mac-kaaga cusub oo leh processor M1.
Apple way ogaatay, mana jeclayn gabi ahaanba. Wuxuu jaray khasaarihiisa, mar dambena lama sameyn karo. Hadda Apple Silicon kaliya ayaa taageera barnaamijyada macruufka ee wax laga beddelay inuu awood u yeesho inuu ku ordo M1-ka. Haddii horumariyaha uusan u habeynin ujeedkan, ma shaqeyn doonaan.
Apple ayaa hirgalisay toddobaadkan a farsamaynta qufulka si looga hortago milkiilayaasha Apple Silicon Macs cusub inay ku shaqeeyaan barnaamijyada IOS ee aan wax ka badalin horumarkooda si ay ugu shaqeeyaan processor-ka cusub ee M1.
Ilaa hada, waxaad kala soo bixi kartaa internetka faylka .ipa ee, tusaale ahaan, barnaamijka iMazing, oo ku rakib dhibaato la'aan Apple Silicon-kaaga. Sida cusbooneysiintii ugu dambeysay ee MacOS Big SurTani mar dambe suurtagal maahan, illaa soo-saaraha iMazing uu sii daayo nooc cusub oo ka mid ah barnaamijkeeda macruufka ee la jaan qaada Apple Silicon.
Hada laga bilaabo, markaad iskudayeyso inaad rakibato codsi adigoo adeegsanaya habka kor lagu sharaxay, a fariin qalad ah oo oranaya "Codsigan lama rakibi karo maxaa yeelay soo-saaraha ayaan ugu talagalin inuu ku shaqeeyo barnaamijkan." Nadiifi biyaha.
Barnaamijyada kaliya ee iPhone iyo iPad ee hadda lagu rakibi karo Mac-yada ku saleysan M1 waa kuwa ay leeyihiin kuwa horumariya wax laga beddelay si cad loogu talagalay tan, inkasta oo ay yihiin codsiyada iOS, waxay la jaan qaadayaan Macs-ka cusub.
Apple ayaa curyaamisay muuqaalkan Apple Silicon Macs kaas oo lagu cusbooneysiiyay noocii ugu dambeeyay ee MacOS Big Sur 11.1 y MacOS Big Sur 11.2 beta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » MacOS Big Sur » Apple mar dambe uma oggolaanayso rakibidda barnaamijka macruufka ah ee 'Apple Silicon'